Elu àgwà Hex bolt Manufacturer and Supplier | Yanzhao
A na-eji ihe nkedo Hex mee ka akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa jikọta ọnụ iji mepụta mgbakọ ma ọ bụ n'ihi na enweghị ike ịmepụta ya dịka otu akụkụ ma ọ bụ iji nye ohere maka ndozi na mmezi dismantling. ha nwere hexagonal isi na-abịa na igwe eri maka a ike na o siri ike njikwa. Ha na-abịa n'ọtụtụ dịgasị iche iche hex bolt nha maka ngwa ọdịnala dabere na mkpa ya. Ndị a Hex bolts na-abata na igwe anaghị agba nchara, alloy steel na carbon steel ihe nke ana achi achi na ihe owuwu ahụ adịghị ada mbà n'ihi nchara. Dabere na ogologo nke bolt, ọ nwere ike ịbịa site na ọkọlọtọ eri ma ọ bụ zuru eri.
Enwere ike iji bolts Hex maka ọtụtụ ngwa dị iche iche gụnyere ịgụnye osisi, nchara, na ihe ndị ọzọ na-ewu ihe maka ọrụ dịka ọdụ ụgbọ mmiri, àkwà mmiri, usoro okporo ụzọ, na ụlọ. Hex bolts na esorowo isi na-ejikarị dị ka isi arịlịka bolts.
Black-oxide nchara kposara na-adị nwayọọ na-eguzogide ọgwụ na gburugburu akọrọ. Zinc-plated nchara kposara iguzogide corrosion na mmiri gburugburu. Black ultra-corrosion na-eguzogide-ntekwasa ígwè kposara iguzogide Chemicals na idi 1000 awa nke nnu spray.Coarse eri bụ ndị ụlọ ọrụ ọkọlọtọ; họrọ ndị a kposara ma ọ bụrụ na ị na-amaghị eri kwa inch. Ezi na mmezi-ezi eri na-spaced spacte gbochie loosening si vibration; nke ka mma na eriri ahụ, ka mma na-eguzogide ya.
Ezubere bolt ahụ ka ọ dabara ma ọ bụ mee ka ọ ghara ịmịnye ya na nkọwa gị. A na-ejikarị isi hex mee ihe iji mepụta nkwonkwo bolted, nke eriri eriri dabara na oghere ma ọ bụ nut. Dedị 2 bolts agbasaghị-eji na-ewu maka isonyere osisi mmiri. A na-eji ọkwa 4.8 eme ihe na obere engines. N'uzu 8.8 10.9 ma ọ bụ 12.9 bolts na-enye nnukwu ike ọdụdọ. Otu uru bolt fasten nwere karịa welds ma ọ bụ rivets bụ na ha na-enye ohere maka mfe disassembly maka mmezi na mmezi.
Nke gara aga: Akọrọ nke kporo
Osote: Flange Head mkpọchi
Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi
Black Oxidation Hex mkpọchi
Hegzagon Socket Head mkpọchi
Nnukwu Ike Hex Bolts
Black Oxidation Hex mkpọchi, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Din6921 Flange Mkpụrụ, Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi, Nnukwu Ike Hex Bolts, Mkpọchi,